Astrid Lindgren (Af Iswidhish: Swedish: [ˈastrɪd ˈlɪŋɡreːn] ( dhageeyso)) waxay dhalatay 1907 waxayna dhimatay 2002. Astrid waa mid ka mida dadka qoraaga ah ee ugu caansan dalka Iswiidhan.
Astrid Lindgren sanadihii 1960
Nofembar 14, 1907
Waxbarashada ciyaaalka, buugaag sawiro ah, himilo madadaalo
Hans Christian Andersen Award 1958
Buugaagteeda waxaa lagu turjumay in ka badan 90 luqadood oo kala duwan oo addunka ka mid ah.
Qaar badan oo ka mida buugaagta Astrid Lindgren waxa ay noqdeen kuwa caan ah sida filimada iyo TV –yada. Qaar ka mida heesaheeda ku jira filimada waxa ay noqdeen kuwa caan ah. Astrid Lindgren ayaa aliftay heesaha, ayadoo kaalin ka helaysa dadka codka iyo muusiga sameeya. Waxaa kaloo ay samaysay riwaayado ka hadlaya filimada kala duwan ee ay buugaagteeda ka qortay.
Mid ka mid ah buugaagteeda kii ugu horeeyey waxaa la yiraahdaa (Barnidii iskaalshada dheereey) (Pippi Långstrump) kaasoo la soo saaray 1945. Buuggu wuxuu ku saabsan yahay gabar timo guduudan oo madax banaan (xor ah). Magaceeda waxaa la yiraahdaa Pippi Långstrump iyo saaxiibadeed Tommy iyo Annika. Buuggan waa midka kaliya ee lagu turjumay af soomaali.
Barnidii iskaalshada dheereed = Pippi Långstrump
Dhimashadii Astrid Lindgren ka dib waxaa la aas aasay abaal marin la bixiyo sannadkii hal mar si loogu xasuusto Astrid. Abaal marintaas waxaa la yiraahdaa Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA-priset). Abaal marintaas waxaa la billaabay 2003, waxayna noqotay abaal marin buugaag oo la bixiyo mida ugu weyn addunka oo dhan, waxaana diiradda lagu saaraa buugta ka hadlaysa carruurta iyo dhallinyarada.
Sidan ayuu u egyahay guriga Astrid ee Stockholm: http://www.astridlindgren.se/sites/default/files/dalagatan/AL_Dalagatan_sv.html
Halka ka daawo noloshii Astrid: http://www.astridlindgren.se/en
Isha uu ka yimid Edit
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Astrid_Lindgren&oldid=190718"
Last edited on 7 Febraayo 2019, at 12:46
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 7 Febraayo 2019, marka ee eheed 12:46.